လမ်းလုရာကနေ ရန်စထိုးကြိတ်ဓါးနဲ့ခုတ်ခံရသူက လူသတ်တရားခံပြန်ဖြစ် (ရုပ်သံ) – ရွှေအလင်း
တရုပ်နိုင်ငံ ဂျင်ဆူးပြည်နယ်က ကူရှန်းမြို့ပေါ်တွင် တနင်္လာနေ့ညက ကားလမ်းလုရင်း ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြပြီး လူတစ်ယောက်ကို အုပ်စုဖွဲ့ ကာ ထိုးကြိတ်၊ ဓါးနဲ့ခုတ်ခဲ့ရာမှ တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့သည်။
အဆိုပါအမှုတွင် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသူကို လူသတ်တရားခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးခဲ့သည့်အတွက် တရုပ်နိုင်ငံ တရားစီရင်ရေးအပေါ် မကျေနပ်သည့် ဝေဖန်သံများ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ တနင်္လာနေ့ ညပိုင်းက ‘ယု’ ဟုအမည်ရသော အမျိုးသားတစ်ဦးက လျှပ်စစ်စက်ဘီးကို ပက်လက်ဖောင်းကပ်လျက် ယာဉ်ကြောအတိုင်းစီးလာခဲ့ရာ လမ်းဆုံအရောက်တွင် မီးနီသွားဖြင့် အရှိန်လျော့ ရပ်တန့်ရန် ကြိုးစားစဉ် အခြားယာဉ်ကြောမှ မောင်းနှင်လာသော BMW စီဒင်ကားက သူ၏နောက်ကနေ အတင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် စက်ဘီးကို ရှေ့တိုးဖို့ ပြောစဉ် ‘ယု’က ရပ်ကြည့်နေခဲ့သဖြင့် ကားပေါ်မှ လူနှစ်ဦး ဆင်းလာပြီး ‘ယု’ ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောကာ စက်ဘီးကို ပက်လက်ဖောင်းပေါ် တွန်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုနောက် သူတို့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ အချီအချစကားပြောနေစဉ် BMW ကားထဲမှ ‘လွီ’ ဟုအမည်ရသော တတိယလူတစ်ဦး ထွက်လာပြီး ‘ယု’ ကို စတင်ထိုးကြိတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့အဖော် နှစ်ယောက်ကလည်း ဝင်ဆွဲခြင်းမပြုပဲ ပြန်လည် ခုခံသော ‘ယု’ ကို တစ်ချက်တစ်ချက် ဝင်ထိုးခဲ့သေးသည်။
အဲဒီနောက် ‘လွီ’က BMW ကားဆီသို့ ပြန်သွားကာ ဓားရှည်ထုတ်ယူလားပြီး ‘ယု’ ကို ဓါးနဲ့လိုက်ပိုင်းခဲ့သဖြင့် ပတ်ပြေးခဲ့ရပြီး ပြန်လည်ခုခံရာ ‘လွီ’ ရဲ့လက်ထဲမှ ဓားလွတ်ကျခဲ့ပြီး ဓားကို ‘ယု’ ကကောက်ယူကာ ပြန်လည် ခုတ်ပိုင်းခဲ့သဖြင့် ‘လွီ’ သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
အဆိုပါအဖြစ်ပျက် ဗီဒီယို အွန်လိုင်းပေါ် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် ‘ယု’ အနေနဲ့ မိမိအသက်ကို ကာကွယ်တာဖြစ်လို့ လူသတ်မှု မမြောက်ကြောင်း ‘ယု’ ကို တရားခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အပေါ် ဝိုင်းဝန်းဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
သေးဆုံးသူ ‘လွီ’ ဟာ ၁၉၈၂ နှစ်ဖွားဖြစ်ပြီး ဓါးပြမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဓားထိုးမှုတို့နဲ့ ထောင် ၅ ကြိမ်ထက်မနည်း ကျဖူးခဲ့ပြီး ထောင်ထဲမှာ ၉ နှစ်ကျော် နေခဲ့ဖူးသူလည်းဖြစ်သည်။
တရားခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ‘ယု’မှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုက အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ‘ယု’ ဟာ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ အလုပ်ကြိုးစားသူလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ပေကျင်းသတင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့သော ရှေ့နေတွေရဲ့ အမြင်ကတော့ ‘ယု’ ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်တာထက် ပိုတယ်ဆိုပြီး လက်မခံနိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အဖြစ်အပျက်ကို အသေးစိပ် စုံစမ်းလေ့လာနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကရော ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက် ဘယ်လို ထင်မြင်ချက် ပေးလိုပါသလဲခင်မျာ..?
တရုပျနိုငျငံ ဂငျြဆူးပွညျနယျက ကူရှနျးမွို့ပျေါတှငျ တနင်ျလာနညေ့က ကားလမျးလုရငျး ပွဿနာဖွဈခဲ့ကွပွီး လူတဈယောကျကို အုပျစုဖှဲ့ ကာ ထိုးကွိတျ၊ ဓါးနဲ့ခုတျခဲ့ရာမှ တဈယောကျသဆေုံးခဲ့သညျ။
အဆိုပါအမှုတှငျ တိုကျခိုကျခံခဲ့ရသူကို လူသတျတရားခံအဖွဈ ဖမျးဆီးခဲ့သညျ့အတှကျ တရုပျနိုငျငံ တရားစီရငျရေးအပျေါ မကနြေပျသညျ့ ဝဖေနျသံမြား အှနျလိုငျးပျေါမှာ ထှကျပျေါခဲ့သညျ။
ဖွဈစဉျမှာ တနင်ျလာနေ့ ညပိုငျးက ‘ယု’ ဟုအမညျရသော အမြိုးသားတဈဦးက လြှပျစဈစကျဘီးကို ပကျလကျဖောငျးကပျလကျြ ယာဉျကွောအတိုငျးစီးလာခဲ့ရာ လမျးဆုံအရောကျတှငျ မီးနီသှားဖွငျ့ အရှိနျလြော့ ရပျတနျ့ရနျ ကွိုးစားစဉျ အခွားယာဉျကွောမှ မောငျးနှငျလာသော BMW စီဒငျကားက သူ၏နောကျကနေ အတငျးဝငျရောကျခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီနောကျ စကျဘီးကို ရှတေို့းဖို့ ပွောစဉျ ‘ယု’က ရပျကွညျ့နခေဲ့သဖွငျ့ ကားပျေါမှ လူနှဈဦး ဆငျးလာပွီး ‘ယု’ ကို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျပွောကာ စကျဘီးကို ပကျလကျဖောငျးပျေါ တှနျးတငျခဲ့ပါတယျ။
ထိုနောကျ သူတို့ ပလကျဖောငျးပျေါမှာ အခြီအခစြကားပွောနစေဉျ BMW ကားထဲမှ ‘လှီ’ ဟုအမညျရသော တတိယလူတဈဦး ထှကျလာပွီး ‘ယု’ ကို စတငျထိုးကွိတျ တိုကျခိုကျခဲ့သညျ။ သူ့ရဲ့အဖျော နှဈယောကျကလညျး ဝငျဆှဲခွငျးမပွုပဲ ပွနျလညျ ခုခံသော ‘ယု’ ကို တဈခကျြတဈခကျြ ဝငျထိုးခဲ့သေးသညျ။
အဲဒီနောကျ ‘လှီ’က BMW ကားဆီသို့ ပွနျသှားကာ ဓားရှညျထုတျယူလားပွီး ‘ယု’ ကို ဓါးနဲ့လိုကျပိုငျးခဲ့သဖွငျ့ ပတျပွေးခဲ့ရပွီး ပွနျလညျခုခံရာ ‘လှီ’ ရဲ့လကျထဲမှ ဓားလှတျကခြဲ့ပွီး ဓားကို ‘ယု’ ကကောကျယူကာ ပွနျလညျ ခုတျပိုငျးခဲ့သဖွငျ့ ‘လှီ’ သဆေုံးသှားခဲ့သညျ။
အဆိုပါအဖွဈပကျြ ဗီဒီယို အှနျလိုငျးပျေါ ပြံ့နှံ့ခဲ့ပွီးနောကျ ‘ယု’ အနနေဲ့ မိမိအသကျကို ကာကှယျတာဖွဈလို့ လူသတျမှု မမွောကျကွောငျး ‘ယု’ ကို တရားခံအဖွဈ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရတဲ့အပျေါ ဝိုငျးဝနျးဝဖေနျ ပွောဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
သေးဆုံးသူ ‘လှီ’ ဟာ ၁၉၈၂ နှဈဖှားဖွဈပွီး ဓါးပွမှု၊ ခွိမျးခွောကျမှု၊ ဓားထိုးမှုတို့နဲ့ ထောငျ ၅ ကွိမျထကျမနညျး ကဖြူးခဲ့ပွီး ထောငျထဲမှာ ၉ နှဈကြျော နခေဲ့ဖူးသူလညျးဖွဈသညျ။
တရားခံအဖွဈ ဖမျးဆီးခံထားရသူ ‘ယု’မှာ စားသောကျဆိုငျတဈခုက အငျဂငျြနီယာတဈဦးဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ ‘ယု’ ဟာ လူကောငျးတဈယောကျဖွဈကာ အလုပျကွိုးစားသူလညျး ဖွဈတယျလို့ ပကေငျြးသတငျးမှာ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခြို့သော ရှနေ့တှေရေဲ့ အမွငျကတော့ ‘ယု’ ရဲ့ လုပျရပျဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို ကာကှယျတာထကျ ပိုတယျဆိုပွီး လကျမခံနိုငျဖွဈနကွေပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ အဖွဈအပကျြကို အသေးစိပျ စုံစမျးလလေ့ာနကွေဆဲဖွဈပါတယျ။ မိတျဆှကေရော ဗီဒီယိုကွညျ့ပွီးတဲ့နောကျ ဘယျလို ထငျမွငျခကျြ ပေးလိုပါသလဲခငျမြာ..?
အသက် (၁၅)နှစ်အရွယ် အိမ်အကူအထပ်မြင့် တိုက် ပေါ်မှ ခုန်ချ သေဆုံး
မြန်မာပြည်ဟာ …ကမ္ဘာပေါ်မှာ …ကျန်းမာရေးအဆင့် နောက်ဆုံးဆိုတာကို… သက်သေပြလိုက်တဲ့… ဖြစ်ရပ်တခု
သင်္ဘောသီးတွေ ပက်ပက်စက်စက် သီးအောင် စိုက်ပျိုးနည်း
လားရှိုးမြို့ရှိပုဂ္ဂလိကဘဏ်၏ ဒုတိယမန်နေဂျာမှငွေကျပ် သိန်းပေါင်း(၃)သိန်းကျော်...
မုဒိတာ အသင်းကားမှန်ကို …တပ်မတော်အရာရှိမှ ..ရိုက်ခွဲတဲ့ ကိစ္စ.. နောက်ဆက်တွဲ...